Cabbirida Transkutan macnaheedu waa waa fiilo elektarooniga oo lagu cabbirayo caddaadiska gaaska dhiiga ee ku jira unugayada hoose. Fiilada elektaroonigu waxa ku dhejisan tahay caag yar oo wareegsan ilmaha aya maqaarka lagaga dhejinayaa, caaga waxa ka soo da'aya dareere yar kaas oo sababaya inay fiilada elektaroonigu taabato maqaarka ilmaha. Fiilada elektaroonigu waxa heerku loogu talagalay ay ku kululeynaysaa maqaarka taasina waxay keenaysaa in maqaarkii dhiigayey uu ka soo fiicnaado.
TcPCO2 wuxuu qiimayn ku sameeyaa kaarboonkii ogsayshkii dhiiga ku jiray, waatan ugu badan in wax lagu cabbiro, waxay u baahan tahay heerkul hoose sidaa daraadeed ayey wakhti dheer u qaadanaysaa. TcPCO2 wuxuu cabbiraa cadaadiska gaasta ogsijiinta ee unugyada jirka oo waxay u baahan tahay fiilo elektarooniga oo leh heerkul sare, inta ay ku xirnaanayso waxay ku xiran tahay sida uu ilmaha maqaarkiisu u kobocsan yahay/u weynaaday.